Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya sidee uga jawaabtay darbiga laga dhisayo xadka Kenya? | Sagal Radio Services
Sidoo kale, Dowladdu waxa ay baaritaan ku sameysay warbixinno iyo baaritaanno ku saabsan darbiga Kenya, oo ay diyaarisay Dowladdii hore ee Madaxweyne Xasan Sheekh.
Darbiga Kenya oo qorshihiisa la bilaabay sanadkii 2015kii ayaa dowladdi hore, waxa ay u xilsaartay guddiyo kala duwan oo xog ururin kusoo sameeya xad gudubyada Kenya la sheegay in ay ka sameysay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya.
Guddigii ugu horeeyey ee ka socday Dowladda Federaalka ah ayaa gaaray magaalada Balad Xaawo 18-kii bishii Noofembar 2015.
Guddigaas oo uu hogaaminayey Wasiirkii Gaashaandhigga Soomaaliya wakhtigaa xilka hayey Jeneraal Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini, ayaa soo xaqiijiyey in darbiga Kenya ay qorsheynayso uu kala jaridoono xaafadaha magaalada Balad Xaawo, balse arrinkaas waxa ay sheegeen in ay sabab u tahay dhismeyaasha qeybta Soomaalida oo u faafay dhanka xuduudka Kenya.
Kenya oo xaqiiqsatay sida Soomaaliya ay garowsantahay in ay magaalada Balad Xaawo u faaftay dhankooda, ayaa ku dhawaaqday 29-kii Oktoobar 2016 in ay bilaabeyso dhismaha 30-KM oo ka mid ah darbiga lagana dhisayo xuduuda Somaliya iyo Kenya, iyada oo markaas ay sheegeen in ay ku soo gab0-gabeynayaan muddo dhan 70 maalmood, kuna eg dhammaadka bisha 1-aad ee sanadka 2018.
Sidoo kale, Arrinkan waxa uu yimi kadib markii 14-kii luulyo 2016 Kenya ay ka barakicisay qoysas Soomaaliyeed oo ku noolaa baadiye ku dhow degmada Ceel Waaq, Baadiyahaas oo ka tirsan xuduudda gudaha Kenya qiyaastii 20-KM.
Inkastoo tan iyo sanadkii 2015, Dowladda Federaalka ah ay xal uraadineysay arrinkan hadana waxaa muuqata in lagu guul darreystay sidii Kenya loogu qancin lahaa in ay joojiso dhisidda darbigan, oo noqonaya kii ugu horreyey oo labo dal oo Afrikaan la kala dhex-dhigo.
Dowladda Cusub ee Soomaaliya sidee ku wajaheysaa darbigan?
1. Guddiga dowladda Federaalka ah ee loo xilsaaray arrinkan oo haatan ku sugan Balad Xaawo, waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golaha Baarlamaanka, gaar ahaan guddiga difaaca taas oo ka dhigan in xal u helista arrinkan ay Xukuumaddu si dhow ugala shaqeynayso labada aqal ee Baarlamaanka, si loo gaaro xal ka tarjumaya danta dalka iyo dadka.
2. Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdi Faarax Juxa oo hoggaaminaya wafdigan waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya aysan marnaba ogolaan doonin in lagu soo xad-gudbo tallaabo ka mid ah dhulka Soomaaliya, uuna yahay arrinkani mid ay ka mideysanyihiin dhammaan Madaxda Qaranka iyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed.
3. Sidoo kale, Wasiirku waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ilaalineyso daris wanaagga iyo wada noolaanshaha shacabka mandiqadda. Arrinkan oo ah istaaraatiijiyad cusub oo ay ka duuleyso Dowladda Federaalka ah, oo la doonayo in lagu qanciyo Kenya in ay jiraan xiriir qota-dheer oo ka dhaxeeya dadka wada dega xuduuda labada dal, maantana aan la qaadan karin in lakala dhantaalo nolasha dadkan isir iyo daris wadaagga ah.
4. Qorsheyaasha kale ee DFS ay ka duuleyso ayaa waxaa ka mid ah, in dalka laga sifeeyo Kooxda Alshabaab oo haatan dagaallada socda lagaga saaray deeganno badan, sidoo kalena ay isu soo dhiibayaan Dowladda Horjoogayaal iyo mileyshiyaad badan oo ka tirsan kooxdan kuwaas oo ka faaiideysanaya cafiska Madaxweyne Farmaajo u fidiyey.
Dadka falaanqeeya arrimaha ammaanka ayaa sheegaya in xuduuda labada dal ee dhan 700-KM aan darbi lagu ilaalin Karin, balse ay u baahantahay in Soomaaliya lagu siiyo gacan buuxda sidii ay uga guuleysan lahayd argagixsada Alshabaab oo khatar ku ah ammaanka Soomaaliya iyo midka dowladaha deriska ahba.
5. Dowladda Federaalka ah waxa ay ka bilowday deegaannada xuduudka ah, in ay ka hirgeliso adeegyada dowladdaiyo kuwa asaasiga ah, waxaa markii ugu horreysay xafiis Socdaalka iyo Jinsiyadaha laga furay magaalooyinka Balad Xaawo iyo Doolow, Arrinkan ayaa qeyb ka ah qorsheyaasha dowladdu ay ku dooneyso in ay si buuxda ugu sugto ammaanka deegaannada xuduudka saaran, sidoo kalena ay uga wada shaqeeyaan dowladda Kenya ammaanka xuduudda iyo isdhexgelidda labada shacab.
Tags DARBIGA XADKA